I-Semalt: Akubandakanyi I-Traffic Yangaphakathi Evela ku-Akhawunti ye-Google Analytics
Izinkampani eziningi zamazwe angaphandle zisebenzisa isofthiwe ye-Google Analytics ngenxa yokusebenza kwayo nokuthembeka. Le software isetshenziselwa ukuqapha ithrafikhi kanye nokunikeza abasebenzisi bayo ulwazi oluwusizo ngohlobo lwezivakashi ezifinyelela iwebhusayithi. Futhi inikeza ulwazi ngalokho abavakashi abakwenzayo lapho bevakashela iwebhusayithi. Into engcono kakhulu nge-Google Analytics yukuthi ingahle ibekwe ngokwezifiso, kulula ukuyisebenzisa futhi futhi mahhala. Ukuhlaziya kwe-Google kuyasiza ekugcineni idatha engafuneki kumawebhusayithi - free online casino games no deposit. Kunenzuzo kuwebhusayithi ukuthi ibonise ukuthi ithola ukubukwa okuningi. Lokhu kungenxa yokuthi kungasiza ekuqinisekiseni ukuthi imali engaphezulu ingatholakala kumakhangiso, okuzogcina ekuholeni ekwenzeni ivolumu yokuthengisa. Kodwa-ke, uma idatha yokubika iqukethe idatha eqinile, ukwethembeka kwayo kuyoba ukudukisa.
UJulia Vashneva, iMenenja yeMpumelelo YokuPhepha kwamakhasimende Semalt , utshela ukuthi le data embi iyingozi ngenxa yokuthi ithinta idatha yokubika. Inomthelela omubi kumgwaqo wangaphakathi futhi kufanele ikhutshwe kukhompyutha. Umthombo wale data engadingeki kungase kube ukugaxekile kogaxekile. Le datha ingafakwa ngaphandle kwenqubo elula uma ilandelwa ngendlela efanele..
Isinyathelo sokuqala ukukhomba ikheli lakho le-IP. Ukuthola ikheli le-IP kulula ukuthi uvele ufunde ku-Google "yiyiphi ikheli lami le-IP?" Emiphumeleni yosesho, ikheli le-IP libonakala njengenombolo phezulu kwesikrini, okumele kubekwe phansi ukuze kubhekiswe esikhathini esizayo. Ngemva kokuthola ikheli le-IP, kuzomele ungene ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics bese ukhetha i-akhawunti ofuna ukuyivimba idatha engadingeki. Ngaphansi kwemenyu ye-akhawunti, khetha inkinobho yokulawula bese uchofoze kusixhumanisi somqondisi. Ngemuva kokuthi isixhumanisi se-Admin sivulwe, khetha kusigaba sokuhlunga bese ukhetha konke okukhethwa kukho ukuhlunga. Lokhu kufanele kulandelwe ukukhethwa kwenketho entsha yokuhlunga kulandelwa ukhetho lokufaka isihlungi. Ngemuva kokuthi ukhethe ukhetho lokufaka isihlungi, kuyadingeka ukuthi udale igama lesihlungi. Igama lesihlungi kungaba noma yikuphi, isibonelo, ungakhetha ukuyibiza ngokuthi i-Home traffic noma Traffic Traffic. Emva kokuqamba igama lesihlungi, kufanele uchofoze inkinobho yokukhipha.
Ukukhetha okukhethwa kukho okukhiphayo kuqinisekisa ukuthi awuvimbeli idatha ewusizo kodwa idatha evulekile kuphela engadingeki kudatha yokubika. Inketho engenayo ilandelwa ngokukhetha "ithrafikhi kusuka ekheli le-IP." Isinyathelo esilandelayo ukukhetha "okulingana" nenketho okufanele ilandelwe ngokufaka ikheli le-IP elakhiwe esiteji sokuqala. Emva kwalokhu kwenziwe, udinga ukugqamisa inketho ethi "Yonke iwebhusayithi" bese uchofoza "inkinobho engeza." Isinyathelo sokugcina ukukhetha inkinobho yokulondoloza.
Ngemuva kokuthi inqubo engenhla ilandelwe, i-traffic yangaphakathi izovinjelwa ekubeni iboniswe ku-akhawunti yakho ye-Google yokuhlaziywa. Lokhu kusho ukuthi uma ufinyelela kuwebhusayithi yakho, ngeke kube khona ukurekhoda kwe-traffic yakho yangaphakathi.